သကြားနှင့်ဆား စားမှသိ ( ဝေဘူဆရာတော် ဘုရားကြီး ) | The Noble Eightfold Path
ဒကာကြီးရဲ. သည်.လိုပြောပါမယ်၊ သကြားတို. ဘာတို.တော ဒကာကြီးက ချိုတယ်လို. ပြော
မယ် မဟုတ်လား၊ ဒို.ကတော. မစားဖူးသေးဘူးလေ၊ တောထဲက ရဟန်းက ဒကာကြီးတို.ကို
သကြားချို သလား ပြောစမ်းပါ ဆိုရင် ဒကာကြီးက ချိုတယ်လို. ပြောမှာပဲ မဟုတ်လား။ သည်
တော. ဒို.က ဒကာကြီးရဲ. သကြားချိုတာ ကိုပြောစမ်းပါ ဆိုရင် ဘယ်နှယ်ပြောမလဲ။ (တပည်.
တောက စားဖူးလို ပြောတတ်ပါတယ်ဘုရား။ မစားဘူတဲ. ပုဂ္ဂိုလ်များကတော. မပြောတတ်ပါ
ဘုရား။) ဒို.က မစားဘူးလို. သကြားချိုတာ ဘယ်လိုလဲ လို.ပြောစမ်းပါ။(ထန်းလျက်ထက် အ
ှများကြီး ကောင်းပါတယ် ဘုရား) ဒါဖြင်.ဒို.ကပြောမယ်၊သကြားဟာ ချိုတယ်ဆိုတာက ထန်းလျက်
ထက်ကောင်းတယ် ဆိုတော.ဒို.ကသိပါ.မလား။ (မသိပါဘုရား)။
မေး။ သကြားအချို တကယ်သိအောင် ဒို.ကို ပြောစမ်းပါဦး။
ဖြေ။ သကြားအချို တကယ်သိအောင် မပြောတတ်အောင် ဖြစ်နေပါတယ်ဘုရား။
ဒကာကြီးက စားဖူးသားပဲ၊ ဘာကြောင်.မပြောတတ်ရမှာလဲ။(တပည်.တော်မပြောတတ်တော.ပါဘုရား၊
မေး။ သကြားရဲ. ပုံသဏ္ဍာန် ပြောစမ်းပါ ဆိုတော. ဘယ်.နှယ် ပြောမလဲ။
ဖြေ။ ဆားနှင်.တူတယ်လိုပြောရမှာပါဘုရား။ ဒါပေမယ်.ဆားကတော. ပုရွက်ဆိတ်မတက်ဘူး၊
သကြားကတော. ပုရွက်ဆိတ်တက်တယ်၊အခုလိုပြောပေမယ်.၊ အရှင်ဘုရားသိမှာမဟုတ်ပါ ဘုရား။
ဒါဖြင်.ဘယ်တော.မှသိမှာလဲ။(အရှင်ဘုရားဘုဉ်းပေးမှ သိမှာပါဘုရား) သကြားပုံသဏ္ဍာန်က ဆားနှင်.တူတယ်ဆိုတော.ဒို.က ဆားရော သကြားရော ကောင်းကောင်းမမြင်ဖူးဘူး။ သည်တော. ဆားနှင်. သကြားကွဲပြားအောင် ဘယ်လိုပြောမလဲ။
(ထုံးမှုန်. နှင်. ခပ်ဆင်ဆင် ပါဘုရား။) ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလား။ ဒို.က ဆားကိုသာ မြင်ဖူးတော. သည်ဆားကိုပဲ သကြားဆို ပြီး စားရေားဗျာ၊သည်တော. ဘယ်နှယ်လဲ၊သကြားအမှန်ကို တွေ.ပါ.မလား။(ဆားနှင်.ပဲတွေ.
မှပါဘုရား။)သည် တော.ဒို.ကမှတ်ရတော.မယ်။ သကြားဆိုတာ ငန်တာ ထင်ပါရဲ. လို.မှတ်ရတော.မယ်။ (တပည်.တော်ပာာ အနိစ္စဘယ်လို မှတ်ရမှန်း မသိသလို လွဲနေမှာပါပဲဘုရား။)
အဲသည်တော. သကြားပုံသဏ္ဍာန်ကို လျှောက်ပြောရင် လွဲစရာတွေ အများကြီး ဖြစ်နေပြီ၊သေသေချာချာ ပြောမှဖြစ်မယ်။ (သကြားကိုယူလာပြီး အရှင်ဘုရား ဘုဉ်းပေးပါလို
ပြောမှပဲ ဖြစ်မှာပါဘုရား။) သကြားတော.သိပြီပြောစမ်းပါလို. ဆိုတော. ဘယ်.နှယ်လဲ။
(ပြောတော. ပြောပါရစေနှင်.၊ဘုဉ်းပေး ပါလို.ပြောရမှာပါပဲဘုရား။) စားရင်ငန်မှာလား။
မေး။ အဲသည်တော. ဒကာကြီးက သကြားစားနေတဲ. လူနားက ထိုင်ပြီး ချိုပြီ ချိုပြီ လို ပြောနေရ ဦးမှာလား။
မေး။ အဲသည်လိုပါးစပ်က မပြောတော. သကြားကရောမချို တော့ဘူးလား။
ဖြေ။ ချိုတာပါပဲဘုရား၊ ပြောလဲ နားငြီးရုံ ရှိမှာပါ ဘုရား။
မေး။ သကြားဟာ စားသည်နှင်. တပြိုက်နက် ဘယ်.နှယ်လဲ။
ဖြေ။ အဟုတ်ဆိုရင် ချိုမှာပါပဲ ဘုရား။
မေး။ သည်ရဟန်းကတောထဲက ရဟန်းဗျာ့၊ ငါ အကုန်လုံး မချိုဘူး၊မြို.ထဲက ဒကာကြီးတွေ
လောက် ပြည်.ပြည်.စုံစုံမချိုပဲ တ၀က်လောက် ချိုလိုက်မယ်၊လျော.ချိုလိုက်မယ်ဆိုပြီး ချိုမှာလား။
ဖြေ။ မျက်နှာမလိုက်ပဲ အတူတူချိုမှာပါ ဘုရား။
ဒါကြောင်. ခုနကရုပ်နာမ်များကိုလဲ ခုနက လိုမှတ်လေ။ သကြားလိုပဲ ချိုပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
သည်လိုမှတ်ရင်း မှတ်ရင်းနှင်. သကြားနှင်.ဆားလွဲမှား နေဦးမှာလားဗျာ.။ ဒကာကြီးက ဆားနှင်. သကြားသေသေချာချာကွဲသလား။ဒကာကြီးဟာ ဈေးထဲကို မကြာမကြာရောက်သွားပြီး
ဆားဝယ်စမ်း ဆိုရင် သကြားဝယ်လာမှလား။(မမှားပါဘုရား၊ ကုလားကိုယ်တိုင် ဆားဆိုရင်
ဆားပဲ ပေးလိုက်တာပါပဲ ဘုရား)
အခုလဲ ကုလားကတောင် မမှားဘူးဆိုတော. အတု အတူမရှိတဲ. ဘုရားရှင် သေသေချာချာ
ကိုယ်တော် တိုင်ထိုးထွင်းပြီး သိပါတဲ.အတိုင်း ဆင်းရဲကလွတ်ချင်တဲ. လူနတ်ဗြဟ္မာ တို.ကို
စား ဆိုပြီးသေသေချာချာပေးလိုက်တာပဲ၊ စားသာစား၊ မမှားပါဘူးဗျာ.၊ မှားမှားစိုးတာနှင်.
မစားဘဲနေတာလား။ (သည်အချိန်တောင်မ ရောက်သေးပါဘုရား၊ပြောတာ နားထောင်တုန်း
ပါပဲ ဘုရား။) ဒါဖြင်.ခုနကပြောသလိုစားဗျာ့၊ မမှားပါဘူးတဲဗျာ.၊အေး..ဘာကြောင်. မမှားသ
လဲဆိုရင် ရုပ်နာမ်ဆိုတဲ.ဟာ အစဉ်အမြဲ ဖြစ်ပြီးပျက်နေတာတွေ.ပဲ။
မေး။ ဒါပေမဲ.ဘာကြောင်.အခုမသိသေးသလဲဆိုရင် စားဆိုရုံနှင်. မစားဘဲနေရင်သိပါ.မလား။
အေး…အခုလဲ သည်လိုကတော. သိနေတယ်။ဒါကရုပ်၊ဒါကနာမ်၊ဒါကသုတ်၊ဒါက၀ိနည်း၊ဒါကအဘိဓမ္မာ၊ သည်လိုတော.သိနေပါပြီ။ဘုရားရှင် ဟောတာကိုတော. မေတ္တာရှင်၊ကရုဏာရှင် တွေကလဲ မအားမပြတ်ရအောင် ညွှန်ကြားဆုံးမထားတော. ဒါကသမထ၊ ဒါက၀ိပဿနာ ဆိုပြီးသိနေတယ် မဟုတ်လား။(ဒါလဲ လုံးလုံးထွေးထွေးပါပဲဘုရား။) ထွေးလဲထွေးပစေ၊ အခုနလိုသာဂရုစိုက်ဗျာ.၊ နောက်ကျရင်လုံးထွေးမှာ မဟုတ်တော.ပါဘူး။သူ.ဟာနှင်. သူသီးသန်. နေပါမယ်ဗျာ.။
အရှေ.သွားတော. အရှေ.ရောက်မယ်၊ အနောက်သွားတော. အနောက်ရောက်ပါတယ်။(တပည်.တော်က မျက်စိလည်ပြီး အရှေ.ကိုအနောက်မှတ်ပြီး လျှောက်နေမိမှာ စိုးပါတယ်ဘုရား။)သည်နေရာမှာတော. မီးရထားစီးသလိုပေါ.။ ဒကာကြီးက သည်ကနေပြီး ဘယ်ကိုစီးချင်သလဲ (မန္တလေး စီးချင်ပါတယ်ဘုရား)
အေး..မန္တလေးရထားသာ မှန်မှန်တက်စီး ၊တောင်ခေါင်းထဲသွားချင်သွားပါစေ၊ မဆင်းနဲ.အဲဒါဆင်းရင် လွဲသွားမှာပဲဗျာ.။ဆင်းသာမဆင်းနဲ.။မန္တလေးရောက်မှာပဲ။
ရထားကဘာတဲ.ဆိုရင် နှာသီးဖျား၊ နှာသီးဝ ကလေးကို လက်နှင်.ထိတော. သိသလိုပဲ သည်လို စူးစူးစိုက်စိုက်ကလေးသာ သိနေ၊ အဲဒါ မီးရထား ပဲဗျာ၊ဘာတုံး ဆိုရင် မဂ္ဂင်တည်းဟူသာလှေ၊ မဂ္ဂင်တည်ဟူသောဖောင် သည်လိုပြောကြတယ်မဟုတ်လား။ စီးသာစီး မဂ် ဖိုလ်ရမယ်။
This entry was posted on December 6, 2011 by Noble Kyaw. It was filed under ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ .